A ga-ewepụta Google Pixel 4 na October 15 | Gam akporosis
Izu ndị a anyị bụ na-abịarute ọtụtụ akụkọ banyere Google Pixel 4. Ọgbọ ọhụrụ nke ekwentị sitere na ụlọ ọrụ America ga-egosipụta n'ihu ọha na Ọktọba. Ha jiri ihe eji eme ihe ohuru, ya na igwe onyonyo abuo, na agba ọhụrụ, dị ka a hụrụ na ụbọchị ole na ole gara aga. Ofbọchị ngosi nke ụdị bụ otu n'ime nnukwu obi abụọ ruo ugbu a.
Luckily, ọ dị ka anyị nwere ụbọchị ngosi maka ọgbọ ọhụrụ a nke ekwentị. Ozi nke na-abịa na nke a sitere n'aka Evan Blass, onye mgbapụta ama ama. O kpughewo ihe ga-abụ ụbọchị ngosi nke Google Pixel 4.
Ọ na-ekwu na Ọ ga-abụ Ọktọba 15 ka ewepụtara Google Pixel 4 ndị a. Ọ ga - abụ ụbọchị dị iche karịa ihe ụlọ ọrụ ahụ na - emebu, nke hapụrụ ọgbọ atọ mbụ ya niile na otu ụbọchị. Yabụ na ọ bụ ihe n'agbanyeghị na ọ nwere ike ịbụ eziokwu, ụfọdụ enweela obi abụọ.
Obi abụọ adịghị ya, ọ bụ ngosipụta a na-atụ anya nke ukwuu n'echiche a, n'ihi na ekwentị ọhụrụ a ga-abụ isi maka ụlọ ọrụ ahụ. Mara nke ahụ ha choro ohuru ohuru nke na ere nke oma, karịsịa mgbe Nsonaazụ dị mma site na ekwentị ha ọnwa ndị a.
Ka o sina dị, ichere na-adị mkpumkpu ka anyị wee nwee ike ịmata Google Pixel 4 ndị a na eze. Ihe dị iche iche ga-eme ka anyị nwee ọtụtụ mgbanwe, ma na nhazi ya na ọrụ ọhụụ ndị a ga-ewebata. Ebe ọ bụ na ọhụrụ akara na-atụ anya na-enweghị imetụ ekwentị na imeghe ihu ọhụrụ na ya.
Anyị ga-ege ntị na nkwenye nke ụbọchị a maka ngosipụta nke Google Pixel 4. Ọ gaghị eju gị anya na ọ ga-abụ Ọktọba 15. Evan Blass bụ ebe a pụrụ ịdabere na ya n'ozuzu ya, yabụ iburu ụbọchị a n'uche bụ obere ihe anyị nwere ike ime. Mana anyị na-eche ụfọdụ nkwenye sitere na Google.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Google Pixel 4 ga-enweworị ụbọchị ngosi